Vhidhiyo chinyorwa chechibhadharo Brenton Tarrant (live stream) Christchurch New Zealand: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 16 March 2019	• 14 Comments
Mifananidzo yemavhidhiyo iyo Brenton Tarrant aizodai akagadzira kuburikidza nehupenyu hupenyu panguva yekurwisana mumasikiti kuKristuchurch New Zealand, inoshamisa chaizvo (ona vivhidhiyo pasi apa). Ndinoda kuvaratidza pano kuitira kuti iwe ugone kuumba maonero ako pamusoro pezvokwadi yekurwisa uku. Mandiri Nyaya yapfuura Ndakaratidza kuti ndedzipi nzira dzekugadzirisa zvinhu zvakadaro pamutambo. Vhidhiyo inoyerera inoratidzira inoratidza kuti hakuna nzvimbo inogona kuonekwa. Iyo shooter inogonawo kufamba mumoto wepakaki yakashongedzwa pasina munhu upi zvake anopindura achitya. Izvo zviri pachena kuti hazvirevi kuchema mumusikiti, asi iwe unotarisira kuti vanhu vatiza nekutya.
Ichokwadi kuti tichaberekwa kuburikidza nemifananidzo uye nyaya dzehama dzinopona kuburikidza nemitambo, asi kana iwe uchiziva nzira dzekuita zvakadzama zvinyorwa zvese, uye kunyange mavhidhiyo asina kunaka uye mapikicha anosanganisira nzvimbo yose yekutambirwa kwevanhu, saka isu tinogona kunge takangwarira. mukutenda kusina kusarura uye bofu mumifananidzo yakaratidzwa. Nezvino maitiro ekugadzira, nenzira ye software uye maitiro ekugadzira (AI), zviri nyore kwazvo kugadzira vanhu vasiripo uye kuipa chero ipi zvayo yaidiwa. Iwe unogona kuita nhaurirano yakararama nemumwe munhu apo kusipo (chiso chakakomba) chiso chinogona kushandiswa sechifukidziro munguva chaiyo uye hapana anozoona kuti yakakanganisa. (tarisa vhidhiyo iri pasi apa uye ramba uchiverenga pasi)
Saka hatizivi kana Brenton Tarrant aripo chaizvo. Iwe unobata chiso chakadzika fake kuburikidza, semuenzaniso iyi NVDIA software, saka iwe unogona nyore kuisa video yose mumwana. Chinhu chimwe chete chaunoda ndiko kusanganiswa kweimwe software ne idzi magreencreen techniques. Zvechokwadi tichaona mifananidzo yemhosva uye isu pasina mubvunzo tichaona foni kana kuchengeteka kamera mifananidzo, asi isu hatigone kufunga kuti chero video kana rerekodhi rekodhi inogona kuongororwa kuti ichokwadi. Iyoyo nyaya yekuvimba uye nokuda kweiyo, hurumende inoda kuti tive netariro ye "fake news" checkers iyo yakapa, asi zvino unofanirawo kuvimba nemucheki anoongorora nyama yake. Mucheki uyo anoongorora nyama yake pachavo achawanzobvuma uye uye, kazhinji, anoita seine chikonzero chakakosha pakuvimbika. (tarisa vhidhiyo iri pasi apa uye ramba uchiverenga pasi)
Mhinduro yakakodzera inobva kumuverengi pano paiti ndeyotevera:
Ndeipi kupi mukomana weC28 wokuzvarwa akawana mari yokutanga kuenda kuEurope uye anoshanyira nyika dzakasiyana-siyana ikoko kuti ape pfungwa dzake uye ruvengo. Ko zvino munyoro uyu anogona kuwana hupenyu kwemwedzi mishomanana muDunedin, anova nhengo yekambani yekuputira ndokuzobhadhara motokari kuti aite chiito chake here? Munhu akadaro anotora sei kadhi rechikwereti.
Zvisinei, chii chinoshamisa kwandiri chikuru ndicho nguva pakati pekuputika kweviri. Ndanzwa 11 maminitsi uyewo 7 maminitsi. Nharaunda yakadaro mamiriyoni e6, asi kana iwe uchifanira kupinda mumotokari kubva mumusikiti wekutanga uye ukafamba rwendo urwu (kupaka motokari uye kuenda kumusikisi unotevera) inguva ino yakakwana here?
Nokuti ndinorarama pano ini, ndaida kutora nzira nhasi. Zvinosuruvarisa, migwagwa yakawanda yakapoteredza musikiti yekutanga kupfura yakangovharwa. Kunyange zvakadaro, ndinoda kuedza zvakare mukati mevhiki kuti ndione kana iyi 6 km inogona kuvharwa mukati memaminitsi e7 (musi weChishanu manheru).
Funga zvakare pamusoro pazvo iwe pachako. Mamiriro okunze aizoziva Dambudziko, Reaction, Solution anogona kutamba mutambo here? Chero zvazviri, kupisa uku kunobatsira kukurudzira mapoka evanhu kurwisana. Mutungamiriri wenyika yeAustralia Fraser Anning akatongerwa muslamusiya kutama nguva pfupi mushure mokunge kupfura. Uye saka iyo inowedzera uye inodonhedzwa yakaita seyakasungirirwa iyo inogona kukurudzira zvinopesana, kuitira kuti zvinodiwa zvino zvigadzirwa (ona yangu Nyaya yapfuura). Iri ndiro Hegelian dialectics, apo nyanzvi uye anti-thesis inotungamirira kuhutano. Saka iwe unoda kuwedzera uye kuisa pfu kuti uwane ikozvino kubva pakiti. Nenzira iyi, kupesana munharaunda inokurudzirwa kukurudzirwa kuva huru pamwe uye kuderedza mapurisa. Izvi zvinogona kuitika kuburikidza nekushanda kwepfungwa (PsyOps). Tongere iwe pachako.
Kana iyo vhidhiyo iri pasi iri yabviswa, tora pane iyi link.
Source chinyorwa listings: theguardian.com
Robert Jensen uye bhuku rakasviba raAnold Karskens NOS nhau 'rinorwisana kushorwa rinoratidza: munda hausi mauri
Iwe unotarisa TV, rudimbu kana firimu zuva rimwe nerimwe here? Zvino iwe uri nguva yakazara pasi pehutanosi uye kwete zvakakomba
Kutsvakurudza kunoratidza kuti NOS nemapurisa vanogona kuita uchapupu hwenhema uye kuti anbi anogona kududzirwa nhema
Izvo zvisinganzwisisiki zvechidiki kufanotaura remangwana kana iwe ukaona kuburikidza neshoko: ivai Nostradamus
Tags: mifananidzo, Brenton, Christchurch New, Featured, footage, Fraser Anning, kurarama, musikiti, kupfura, smokee's, chikova, Tarrant, Video, Zeeland
Yuri Goosen akanyora kuti:
16 March 2019 pa 20: 22
Handina kuona pakarepo kuti pandakaona mifananidzo yepakutanga, asi ndakatarisa kumashure imwe nguva imwe, ndakaona kuti mufambiro unoshamisa kune vanhu. Zvandakawana zvisinganzwisisiki ndezvokuti mushure mokudhonza kwekutanga, mapoka evanhu vakanga vachiri kugara pamwechete mumusikiti. Zvakanaka, inogona kuva shok. Asi akapa mumwe nomumwe kupisa kupisa pamugumo. Pamusoro pezvifananidzo zvemashoko pane kamwe kamwe vazhinji vanopukunyuka uye hapana pavanogona kuona mabheti emhando. Inogona kuuya kuburikidza nemakumbo akaipa. Asi zvinoshamisa uye chaizvoizvo zvakafanana mureza wenhema!
17 March 2019 pa 10: 33
Iko kuongorora kunoshamisa.
Ndakatumira izvi (vhidhiyo yakabviswa) paVimeo.com Mumasekondi mashomanana akaunti yangu yose yakabviswa.
17 March 2019 pa 16: 09
17 March 2019 pa 21: 22
Zvichiitika, ndinonyatsozviparadzanisa kubva kune QAnon inowanikwa muvhidhiyo yakabatana nokuti, mumaonero angu, QAnon inoshandiswa psyop, iyo ichabatanidzwa nekuuya kwekuuya kwaTrump uye nedhora.
16 March 2019 pa 21: 15
Eva Gabeler achitaura pane imwe nzvimbo yakazadza michero yemichero neDutch maruva kumashure kuti semusikana musikana anofanirwa kuzivisa mutori wenhau weTelgraaf ari kutaura pamusoro pezvinonyangadza uye zvisati zvaitika, mhando ipi yemifananidzo inoonekwa naEva? iwe unofunga .. zvatisati taona. Eva anoita kunge ari muchengeti akanaka kwazvo, uye grin yake haina kunyatsoratidza kuti anofara.
Kufungidzirwa kwepolballball masikati kubva kubato repalball rinotarisa zvakanyanya. Iwe haunzwisisi nokuti zvose zvingawanikwa zviripo
zvose zvishoma zvisikwa uye zvisingaonekwi.
Uye zvekare iwe une dambudziko remumunda vatambi,
16 March 2019 pa 23: 33
Inozivikanwa (zvichida) haina kuitwa kunyange zvakadaro (ivo vanogona kutaura kuti zvakanga zvakajeka kuti zvakanga zvisiri zvechokwadi). Nhamba yevanhu mumavhidhiyo haifani nhamba dzinotaurwa, nenzira, panofanira kuva 100. Uyezve, zvichida rega zvombo zvigadzirise kutaura nezvokuti zvombo zvakadaro zvinowanzoita sei.
Uye zvichida kuNew Zealand, nokuti ndeimwe yenyika yekupedzisira apo unotarisira chimwe chinhu chakadaro. Kwakave mwedzi mishomanana chete. Kana zvikaitika ikoko, zvinogona kuitika kupi zvako.
16 March 2019 pa 23: 48
Nhasi uye nhasi ndakaedza kusvika kumas Mosque. Zvisinei, migwagwa inoshandiswa kubva kune dzakasiyana-siyana inopfigwa nekuda kwemigwagwa (yaiva iyi mupata usina ruzivo kare kare)? Unofanira kuedza zvakare mumavhiki mashomanana.
17 March 2019 pa 02: 12
Tora izvi kwechinguva:
The Herald inoshuma kuti murwi anomhanyisa achifamba ari kupotera kwemaminitsi e17.
Zvinyorwa zvinoreva Carl Pomare maneja weNaki Labor Hire aiva mumwe wevanhu vekutanga vari panzvimbo. Akanga ari kutyaira mumusikiti pamusoro pe1.40pm uye akaona vanhu vakawanda vari kutamba. Akanzwa kuputika kuchienda pakarepo moto uye vanhu vachirova pasi.
The Herald iri kutaurira mumwe mupfuri wepfuti akaona pedyo neLinwood Masjid Mosque. TV3's Newshub inoti zvipupuriro zvakashuma ichiona mumwe murume wepfuti achimhanya mumusangano ikoko.
Saka kumativi e1.40 kutanga kwakagadzirwa paMusque wekutanga apo mitsutso yakararama yemaminitsi e17 yakaitwa. Saka mutambi wacho angangodaro akaendesa kumusikiti wechipiri nguva pfupi yapfuura maawa 2. Nguva ipi inotaurwa pamusoro pekupfura kwechipiri?
17 March 2019 pa 02: 36
Mapurisa akati pane kuputika kwechipiri paLinwood Masjid Mosque.
Mark Nichols akaudza New Zealand Herald kuti akanzwa nezvemapuranga mashanu uye kuti mwedzi weChishanu munyengetero-goer akadzorera moto nepfuti kana pfuti.
VaNichols vakati vakaona vanhu vaviri vakakuvadzwa vari kutakurwa kunze kwevatengesi vanokodzera chitoro chake chemotokari uye kuti vanhu vose vakaonekwa sevapenyu.
zvakarezve chapupu kumusikiti wechipiri.
"Takanga tava mumaminitsi edu e10 eminyengetero yedu uye takabva tanzwa kuputika kwepfuti kunze, asi takaramba tichinyengetera. Mutsara unotevera, waiva mukati. Akanga ari ganda rakatsvuka uye akaedza kupfura uye isu tose taifamba kuti tifukidze.
saka kana vhidhiyo yokutanga yepurazi yakabudisa zvinhu zvemaminitsi e17 uye yatanga ron 1.40 - 1.45 (pane zvakanyorwa 15 maminitsi isati yatanga kunyengetera) uye yechipiri 10 maminitsi mushure mokunge minyengetero yekudaro munyori wacho anofanira kunge ane Sun 10 maminitsi kuti uwane kubva paA kuenda kune B.
zvakare kushamisika kuti mukati mehafu yeawa hapana matanho akakwana akaendeswa kune mamwe misikiti (zvinokwanisika zvinangwa)
17 March 2019 pa 10: 51
17 March 2019 pa 12: 52
17 March 2019 pa 13: 43
Ndicho chikonzero nhoroondo ye vimeo yandakange ndavavhara kwemakore mumasekondi mashomanana ... kure nemavhidhiyo.
Censorship! Geroge Orwell ...
17 March 2019 pa 17: 07
George Orwell = anowanzofungidzirwa
1 April 2019 pa 20: 11
1 vhiki yapfuura
Nguva iyo kuwana ruzivo rwakachengetedzwa, unogona kuva nechokwadi chokuti uri kuimba.
Hakuna munhu akambochengetedzwa nekuchengeta chokwadi. Uyu hurumende yakaora mukuita.
« 49 yakaponda mukurwisana pamasikiti maviri muna Christchurch New Zealand
Iko Brenton Harrison Tarrant inorwisa kutanga kwebato rakanaka rekurwisana neTurkey here? »
Total Visits: 11.631.395